रौतहट : ट्युबमा लुकाएर बजारमा मदिरा ल्याउदै ! - Birgunj Sanjalरौतहट : ट्युबमा लुकाएर बजारमा मदिरा ल्याउदै ! - Birgunj Sanjalरौतहट : ट्युबमा लुकाएर बजारमा मदिरा ल्याउदै ! - Birgunj Sanjal
रौतहट : ट्युबमा लुकाएर बजारमा मदिरा ल्याउदै !
२९ भाद्र २०७६, आईतवार १६:५९
रौतहट। प्रहरीले दिनहुँ अवैध मदिरा बरामद गर्न थालेपछि कारोबारीले नयाँ/नयाँ प्रविधि अपनाउन थालेका छन् । विभिन्न खाले सवारीको प्रयोग गर्दै आएका कारोबारीले पछिल्लो समय गाडीको ट्यूबभित्र मदिरा राखेर ओसार–पसार गर्न थालेको पाइएको छ ।
कारोबारीको नयाँ शैली देखेर प्रहरीसमेत अचम्ममा परेको छ ।गुजरा नगरपालिकाको खतबैया टोलमा गाडीको ट्युबभित्र राखेर लैजाँदै गरेको ३५ लिटर अवैध मदिरा इलाका प्रहरी चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी निरीक्षक रूपेश साहको टोलीले बरामद गरेको थियो । प्रहरीलाई देखेपछि कारोबारी भागेका थिए ।
उनीहरूले सुरुमा जर्किनमै बोक्थे । प्रहरीले थाहा पाई पक्रन थालेपछि बोराले बेरेर लैजान थाले । त्यो पनि समात्न थालेको भन्दै सवारी साधन नै बदल्ने थाले ।बस, ट्रकमा ओसार–पसार गर्दै आएका उनीहरू रिक्सा, अटोरिक्सा र इरिक्सा प्रयोग गर्न थाले ।
प्रहरीले त्यो पनि पत्ता लगाई मदिरा बरामद गर्न थालेपछि अहिले मोटरसाइकल प्रयोग गर्न थालेका छन् ।गाडीको ट्युबमा मदिरा राख्न सुरु गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बबित कटवालले बताए । ‘अवैध मदिरा कारोबारीले सबै हतकण्डा अपनाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘जतिसुकै कडाइ गर्दा पनि अवैध मदिरा ओसार–पसार गर्नेहरूमा चेतना आएको छैन ।’
गाडी पञ्चर भएको जस्तै गरी ट्युबभित्र मदिरा ओसार–पसार गर्न थालेपछि प्रहरीले यसमा पनि कडाइ गर्न थालेको छ ।गाडीको ट्युब बोकेर हिँडेको जो कोहीलाई चेकजाँच गर्न प्रहरी लागिपरेको छ । इलाका प्रहरीले एक साताभित्र २ हजार लिटर अवैध मदिरा बरादम गरी नष्ट गरेको छ । जिल्लाभरि मदिरा कारोबारीविरुद्ध प्रहरी आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भए पनि यसको उत्पादन र कारोबारी निरुत्साही हुन सकेका छैनन् ।